समुद्रमाथि संसारकै सानो देश ! -
संसारको सबैभन्दा सानो देश कुन हो ? जवाफ आउँछ भ्याटिकन सिटी । यो जवाफ सत्य पनि हो । तर, बेलायतको तटपारी एउटा त्यस्तो ठाउँ छ, जसले आफूलाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश मान्दछ । संसारका अरु कुनै पनि देशले त्यसलाई देशको मान्यता दिएका छैनन् । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यो देश संसारकै सबैभन्दा सानो देश हुन्थ्यो । तैपनि यो देशको आफ्नै झण्डा, राष्ट्रगान, मुद्रा राजसंस्था, राहदानी समेत छ । त्यस देशको नाम हो, सिल्याण्ड ।
सबैभन्दा गजबको कुरा त के छ भने, त्यस देश जमिनमा छैन । खासमा यो देश दोश्रो विश्वयुद्धमा जर्मन आक्रमणलाई परास्त गर्न बेलायतको तटपारी समुद्रमा बनाइएको एचएम फोर्ट रोग्स हवाई प्रतिरोधी तोपका दुई खम्बाजस्तो जगमा स्थापित छ । यहाँ बस्नका लागि घर छ, हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न हेलिप्याड छ । यो देश बेलायतको सफोक शहरको तटभन्दा १२ किलोमिटर टाढा समुद्रमा दुई खम्बामाथि अवस्थित छ । यस देशले केही दर्जन मानिसलाई आफ्नो नागरिकता दिएको छ भने अरु सयौंले यहाँको राहदानी लिएका छन् ।
त्यसैअनुसार संविधान, राष्ट्रगान, झण्डा इत्यादिको व्यवस्था गरी उनले फोर्ट रोग्सलाई सिल्याण्ड नामक बेग्लै देश घोषणा गरे र आफूले आफैँलाई राजकुमार रोय घोषणा गरे । बेलायतले त्यसको विरोध ग¥यो । तर, फोर्ट रोग्स अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुद्रमा रहेकाले बेलायतले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।
सन् १९६८ मा रेडियो क्यारोलाइनले केही भाडाका लडाकु जम्मा पारेर सिल्याण्डमाथि आक्रमण ग¥यो । तर बेट्स र उनका सहयोगी मिलेर पेट्रोल बम र हवाई फायर गरेर सिल्याण्डमाथिको आक्रमण विफल पारे । गजबको घटना त सन् १९७८ मा घट्यो । जतिबेला सिल्याण्डको प्रधानमन्त्री घोषित जर्मन नागरिक अलेक्जेन्डर अशेनबाखले राजकुमार पेडी रोय बेट्स र राजकुमारी जोआना बेलायतमा रहेका बेला केही जर्मन र डच भाडाका लडाकु जम्मा पारेर सिल्याण्डमाथि सैनिक आक्रमण गरे ।
प्रकाशित मिति ५ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:१७